६ वर्ष गुफामा बास गरेको भेंडा बाहिर निकाल्दा....... | Nayashaktionline.com-No.1 News portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment,Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, International News, Local News, Nepal News, All News, Total News, News, News of Nepal, Our Nepal, Every News, Bhaktapur, Kathmandu, Lalitpur All Nepal६ वर्ष गुफामा बास गरेको भेंडा बाहिर निकाल्दा.......
Home अन्तर्राष्ट्रिय ६ वर्ष गुफामा बास गरेको भेंडा बाहिर निकाल्दा…….
६ वर्ष गुफामा बास गरेको भेंडा बाहिर निकाल्दा…….
सन् १९९७ मा न्युजिल्याण्डमा एउटा भेंडा भागेर गुफामा लुक्योे । स्थानीय एक भेंडा फार्ममा रहेका १७ हजार भेंडामध्ये एउटा जिद्दी र डरपोक भेंडा थियो त्यो । जब ऊन काढ्नका लागि भेंडाहरुलाई बाहिर निकालिएको थियो, त्यहीँ बेला त्यो भेंडा गुफाभित्र छिरेको थियो । गुफाभित्र पसेसँगै त्यो भेंडा मालिकको आँखा छल्दै ६ वर्षसम्म गुफाभित्रै बस्यो ।
जब ६ वर्षपछि भेंडालाई मानिसहरुले गुफामा फेला पारे, तब त्यो कुनै भेंडा हो भनेर छुट्टाउनै नसकिने अवस्थामा थियो । ४ वर्षको उमेरमा गुफा पसेको भेंडा १० वर्षको उमेरमा बाहिर निस्किँदा जिउमा २०जना मानिसलाई शुट बनाउन पुग्नेजति ऊन पालेको थियो ।
भेंडाको शरीरमा ६० पाउण्ड ऊन जम्मा भएको थियो र भेंडाको जिउ नै उनको डल्लाजस्तो भएको थियो ।
भेंडाको उनले ढाकिएर डल्लोजस्तै बनेको त्यो भेंडाको तस्वीर त्यसबेला खुबै चर्चित बनेको थियो । चर्चासँगै यो भेंडाको नाम श्रेक राखिएको थियो, जुन एउटा एनिमेटेड फिल्मको पात्रको नाम हो । भेंडा सेलिब्रेटी नै बन्यो र उसको जिउबाट काढिएको ऊन महंगोमा लिलाम भयो ।
सन् २०११ मा बिरामी परेर उक्त भेंडाको मृत्यु भयो । उक्त भेंडाको मृत्युमा न्युजिल्याण्डमा कुनै राजनेताको मृत्युजस्तै गरी शोक मनाइएको थियो ।
प्रियंकापछि आयुष्मानले पनि खोपे ‘आयांक’ नामको ट्याटु
नेपाल राष्ट्र बैंकले करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ ब्याजमा लगानी गर्दै